रामेछाप, ३० असोज। आज रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका भिरपानीको सार्की पँधेरोमा बस दुर्घटना हुदा १३ वर्षीया बालिकाको मृत्यु भएको छ । काठमाडाैंबाट रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिकाको गाल्वातर्फ जादै गरेको बा३ख ४६७५ को बस दुर्घटनामा परि २९ जना घाइते भएका छन् ।
२९ जना घाइते मध्ये १० जनाको अवस्था गम्भीर रहेको रामेछाप जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी स्रोतले जानकारी दिएका हुन् । बस सडकबाट ४० मिटर तल खसेको छ । विपरीत दिशाबाट आएको बसलाई साइड दिनेक्रममा बस दुर्घटना भएको हो । मृत्यु भएकी बालिकाको सनाखत नभएको बताइएको छ।
प्रकाशित : मङ्गलबार, असोज ३०, २०७५१७:५२
आगलागी हुँदा चार पसल नष्ट! करोडौंको नोक्सान,समयमा पुगेन दमकल!
फिलिपिन्समा आँधीबाट मृत्यु हुनेको संख्या ६८ जना पुग्यो !
संस्कृत पाठशालाको पढाइ नेपालमा, प्रमाणपत्र भारतमा!
दुई चालक नराख्ने ४५ सवारी साधन कारवाहीमा !
पाल्पामा यात्रुवाहक बस २०० मिटर खस्दा दुर्घटनाग्रस्त, १२ को मृत्यु: १५ घाइते !
टोपी दिवसका अवसरमा काठमाडाैँमा र्‍याली